घर किन बचपनका कथाहरू
हामी फूटबलरहरूलाई बचपनका कथाहरू बनाउँदछौं प्रशंसकहरूलाई उनीहरू खेल्ने प्लेयरहरूको बारेमा कथाहरूमा जानकारी गराउन। LifeBogger आजको बाल्यकालको समयको सन्दर्भमा फुटबल ताराहरू बारे सब भन्दा हर्षोल्लास, आश्चर्यजनक र मनमोहक कथाहरू क्याप्चर गर्दछ। त्यो हामी के छौं!
पृथ्वीको प्रत्येक मानिससँग बाल्यावस्थाको कहानी छ र फुटबल खेलाडीहरू विदेशी ग्रहहरूबाट होइनन्। न त तिनीहरू महाशक्तिहरू र मानसिक क्षमताहरूको साथ म्युन्टेन्टहरू हुन्। तिनीहरू वास्तवमा मानव हुन् जसले पार्थिव पुर्खाहरूमा तिनीहरूको वंश पत्ता लगाउन सक्दछन्।
यसैले, सबै मानिसजस्तै, खेलाडीहरू, ब्यवस्थापकहरू र खेलकुदका अभिजात वर्गसँग बचपनका कथाहरू हुन्छन् जुन उनीहरूको प्रारम्भिक वर्षदेखि किशोरावस्थादेखि वयस्कताको छेउमा रोइरहेका घटनाहरू रमाईलो र ग्रिपिंग घटनाहरूको बखान गर्दछन्।
Lifebogger फुटबल खेलाडीहरु, प्रबन्धकहरु र कुलीन को उल्लेखनीय बाल्यकाल घटनाहरु विवरण। LR बाट: भ्यान डिजक, लुका मोररिक, Kylian Mbappe, Zinedine Zidane र एलेक्सान्डर सेफेरिन। छवि क्रेडिट: LB.
At Lifebogger, हामी त्यस्ता प्रारम्भिक जीवन कथाहरू क्याप्चर गर्दछौं जुन हामी फुटबल खेलाडीहरू, प्रबन्धकहरू र विश्वभरका कुलीन वर्गका बारेमा प्रस्तुत गर्दछौं।
यस्तो महान कार्यको पछाडिका कारण फुटबलको खेल सुधार गर्न हाम्रो कोटा योगदान गर्नु हो, यो कुरा मनमा राख्दै कि प्रारम्भिक जीवनमा हुने पीडा, लाभ र साथसाथै फुटबल खेलाडीहरू, प्रबन्धकहरू र कुलीन वर्गले मात्र केही मूल्यवान पाठहरू प्रदान गर्दैनन्। जीवन तर रुचि हुन ती जो आफ्नो यात्रा मा शुरू गरीरहेको छ।
जीवनी वा सच्चा फुटबल कथाहरू अन्य चीजहरूमा युवा फुटबल उत्साहीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। छवि क्रेडिट: GhHeadlines।
संक्षेपमा, यस लेखले हाम्रो श्रोतालाई फुटबल खेलाडीहरू, प्रबन्धकहरू र अभिजात वर्गको चाँडो जीवन घटनाहरू चाखलाग्दो शीर्षकहरू अन्तर्गत प्रस्तुत गरेर हामी के हौं भन्ने बारे एक बृहत्तर विचार दिने उद्देश्य राख्दछौं जुन राम्रोसँग कल्पना गरिएको, स्पष्ट लेखिएको र लुभावनापूर्ण छ।
किन बचपनका कथाहरू - फुटबल खेलाडीहरू र एलीट जो गरीब जन्मेका थिए
केहि फुटबल प्रतिभा र कुलीन वर्ग गरीब जन्मेका थिए, कसैलाई विरासतमा केही पनि प्राप्त भएन, र अरुले आफैलाई गरीबीको चक्रबाट खोल्न खोजे। जे भए पनि घटनाहरू झुकाव, गरीबी वास्तवमै एक प्रेरणादायक कारक थियो जसले फुटबलमा प्रसिद्ध कथालाई धनी बनाउँदछ।
अनावश्यक र खतरनाक7अक्षर शब्द जीवन र को साथ उठाउँछ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबै भन्दा राम्रो बाहिर ल्याए Luis Suarez, न त यसले अभिजात वर्गलाई छोडे रोमन अब्रामोविच र Gianni Infantino तर बनेको छ गेब्रियल येशू ' ब्राजिलका लाखौं वञ्चित बच्चाहरूका लागि प्रेरणा दिइने प्रसिद्धिमा वृद्धि।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुइस सुआरेज, जियानि इन्फान्टिनो र गेब्रियल येशूले जीवनको पहिलो जीवन संघर्ष गर्नुपरेको थियो। छवि क्रेडिट: LB.
यी फुटबलरहरूका लागि दुखद हुनुको बावजूद गरीबी एक शक्तिशाली प्रेरक हो। धन्यबाद, फुटबलको खेल तिनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न को लागी एक वाहन बन्यो।
किन बचपनका कथाहरू - फुटबल खेलाडीहरू र एलीट जो जन्मेका थिए
फ्लिप साइडमा, धेरै फुटबल प्रतिभा र कुलीन महान पैदा भयो, के कुनै चाँदीको चम्चाको साथ र अरूहरू हीरा शांतिका साथ। नतिजाको रूपमा, उनीहरूको जीवनको लागि राम्रो सुरूवात थियो र गरीबीको सीमाभन्दा माथि बाँचिरहेका थिए।
को मनपर्‍यो एलेक्सान्डर काफेरिन र माइकल प्लैटिन उनीहरूलाई राम्रो जीवन बिताउन चाहिने समर्थनको साथ सुरुमा सुसज्जित थिए भने धेरै जसो फूटबल खेलाडीहरू मन पराउँछन् मारियो गोजेज, andrea Pirlo र Gerard Pique ख्याति प्राप्त गर्नु अघि धनको लागि कुनै अपरिचित थिएनन्।
मारियो गोट्जे, जेरार्ड पिक र एन्ड्रिया पिरलो धनी परिवारमा जन्मेका थिए। छवि क्रेडिट: LB.
किन बचपनका कथाहरू - फुटबल खेलाडीहरू जसले बच्चाहरूका रूपमा युद्ध र दots्गामा बाँचेका थिए
अन्य फुटबलर खेलाडीहरूको ठूलो संख्याको बाल्यकालिन कहानी गृहयुद्ध र दots्गाहरूको हार्दिक रिचिंग यात्राको माध्यमबाट प्रशंसकहरूलाई खींच नगरी भन्न मिल्दैन जुन खेलाडीहरूलाई अस्तित्वबाट मेटाउन सक्दछ।
जन्म नाइजेरियाको प्रारम्भिक जीवनमा एक नजर विक्टर मोशा उत्तरी नाइजेरियामा दंगाको विनाशकारी प्रभावको बारेमा बताउँछ, न त गर्छ जुआन कुडाराडो र सर्ज एरियर कोलम्बिया शहर नेकोक्ली र आइभरी कोस्टमा क्रमशः हिंसाको खुशी सम्झना छ।
जुआन कुआड्राडो केही फुटबल खेलाडीहरू मध्ये एक हो जसले बाल्यकालको समयमा युद्ध र द .्गामा बाँचेको थियो। छवि क्रेडिट: LB.
किन बचपनका कथाहरू - फुटबल खेलाडीहरू जो लामो समयदेखि बच्चाको रूपमा मरेका थिए
उसलाई फुटबलको खेलको बारेमा थाहा पाउनु भन्दा धेरै अघि, डिएगो कोस्टाको नराम्रो अनुभव थियो जसले लगभग उसको जीवनलाई छोडिदियो।
कोस्टा केवल छ महिनाको उमेरमा भयावह घटना घटेको थियो। ऊ भाँडा माझ्न गए उसको आमाले छोडेर गए। सानो कोस्टा आफ्नो सुत्ने कोठामा गद्दामा सुतिन् उनी पछाडि कुनै विषालु सर्प छ भनेर थाहा थिएन। जब उनकी आमा भान्छाबाट कोस्टाको ओछ्यानमा फर्किन्, उनले एउटा विषालु सर्प आफ्नो बच्चाको नजिक आइरहेको देखे।
जोसिलीडा दा सिल्भा कोस्टाले यो टेपको एउटा टुक्रा हो भनेर सोचेकी थिइन्, तर यो वस्तु जुन उनले टेपको रूपमा लिइन् उनको बच्चाको अगाडि बढिरहेकी थिइन। छिटो आन्दोलनको साथ, उनले तुरुन्तै कोस्टाको हात समातिन् कि उनको प्राण बचाएर त्यो विषालु सर्पले टोकेन भने।
किन बचपनका कथाहरू - फुटबल खेलाडीहरू जसका बुवाहरू खेलका महापुरुषहरू थिए
त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गरिएको छैन कि सल्लाहकारले फुटबल खेलाडीहरूलाई आफूभित्रको आशा देख्न मद्दत पुर्‍याएको छ विशेष गरी जब सल्लाहकारहरू अन्य व्यक्तिहरू होइनन् तर जैविक पिता हुन्।
बुबा जस्तै छोराको जस्तो अर्को क्लिच बिना हामीसँग छ Thiago Alcantara जसले आफ्नो बुबा माजिनोको अनुसरण गरे। अन्य समावेश छन् शाऊल निग्युज जसले आफ्नो बुबा एन्टोनियोको साथसाथै पनि बाटो कुरे सर्जियो Busquets जो उसको बुवा कार्लोसको मोडेलमा थिए। के अन्य कुनै पनि सम्पदा धनी हुन सक्छ?
थाआगो अल्कान्टारा, शाउल निगुएज र सर्जियो बुस्केट्स फुटबल महापुरुषहरूका छोरा हुन्। छवि क्रेडिट: LB.
किन बचपनका कथाहरू - स्कूलबाट बाहिरिएका फुटबल खेलाडीहरू
केही फुटबल प्रतिभाशालीहरूले कहिले पनि सहकार्यमा बस्न र शिक्षकहरूको सल्लाह लिन धैर्यता देखाएनन्, जबकि कोही कोही उच्च विद्यालयबाट स्नातक भएनन् किनभने उनीहरूको फुटबल क्यारियरले उनीहरूको मध्य-किशोरावस्थाको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्‍यो।
फुटबल खेलाडीहरू जस्ता महापुरूषहरू समावेश गर्दछ पेले, साथै ब्राजिलका पूर्व पेशेवर फुटबलर र बार्सिलोनाका लागि राजदूत - रोनाल्डिन्हो। सहस्राब्दी उमेर फ्रेम भित्र प्लेयरमा सर्दै - लेख्ने समयमा - हामीसँग मनपर्नेहरू छन् क्रिस्टियानो रोनाल्डो र बार्सिलोना तारा - लिओनेल मेस्सी जसले परम्परागत शिक्षा पूरा गरेनन्।
रोनाल्डिन्हो, मेस्सी र पेले बाल्यकालमा अस्थिर शिक्षा पृष्ठभूमि थियो। छवि क्रेडिट: LB.
किन बचपनका कथाहरू - फुटबल खेलाडीहरू जसले लगभग खेल्न छोड्छ
यो भनिन्छ कि जब जानु कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अधिकतम मानव प्रयासहरूको सबै क्षेत्रहरूमा वर्षहरूमा मान्य गरिएको छ कुनै फुटबललाई रोक्दैन। वास्तवमा यसले विश्वका पेशेवर फुटबलरहरू प्राप्त गर्न छोड्दैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ जसले उनीहरूको क्यारियर निर्माणको क्रममा लामो समयसम्म अन्त्य गर्न सक्दछन्।
धेरैलाई थाहा छैन वेन रुनीको फुटबलको लागि प्रेम कार्डको प्याक जस्तो टुक्रियो जब उहाँ केवल एक 14-वर्षको बच्चा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी, त्यहाँ कुनै रोमाञ्चकारी भएको थियो इब्राहिमोविच फुटबल को दुनिया मा यदि उनी डकयार्डहरु मा जीवन को पक्ष मा कुरा गरीएको छैन। उसको पक्षमा, एलिसन बेकरको अभिभावकहरूले उसलाई लगभग फुटबलबाट बाहिर तान्यो किनभने उनले 15 को उमेरमा पनि ढिलो जैविक विकास रेकर्ड गरिरहे।
युवा वेन रुनी र इब्राहिमोविच फुटबल खेल्न छोड्छन्। छवि क्रेडिट: LB.
किन बचपनका कथाहरू - फुटबल खेलाडीहरू जसले आउटफील्ड खेलाडीहरूको रूपमा सुरू गरेका छन्
डायनामिक्स एक शब्द हो जुन फिजिक्स टेक्स्टमा फेला पर्दैन, यो फुटबलमा अवस्थित छ जुन खेल फिजिक्सको बारेमा पनि छ। यो सबै पहिलो महत्त्वपूर्ण चरणबाट सुरू हुन्छ जुन फुटबलरहरूले यसको उमेरमा रमाईलोको लागि बलमा लात हान्दै कम उमेरमा लिन्छन्। त्यस पछि, तिनीहरू सडक फुटबलमा संलग्न हुन्छन् वा स्थानीय टोलीहरू र क्लब एकेडेमीहरूको साथ प्रशिक्षणको लागि अगाडि बढ्छन्।
जबकि फुटबलको योजनाहरू यसमा छन्, उनीहरूको सबैभन्दा बलियो क्षेत्र वा फोर्ट स्थापना नगरेसम्म तिनीहरू विभिन्न स्थानमा प्रयास गरिन्छ। यसैले, यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि केहि हतियारको रूपमा आफ्नो व्यापार अग्रसर गर्न बचावपूर्ण स्थितिबाट भटकन् जबकि एक महत्त्वपूर्ण केही लाई थिब्ता कोर्टटोस एक डिफेन्डर हुनबाट एक पूरा गोलकीपर बन्न एक कदम पछि गिर्‍यो। त्यस्तै डेभिड Gea एक गोल पोष्टको आयाम भित्र उसले घरमा महसुस नगरे सम्म आउट आउटफिल्ड खेलाडी थियो।
डेभिड Gea र Thibaut Courtois गोलकीपर हुनु अघि पहिलो पटक आउटफिल्ड खेलाडीहरूको रूपमा प्रशिक्षण दिए। छवि क्रेडिट: LB.
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो बाल्यकालका कथाहरू पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईंलाई केहि राम्रो लागेन भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीसँग सेयर गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।